वार्षिक ५० करोडको जैतुन खेर जाँदा सरकारको ध्यान कता ?
Home banner वार्षिक ५० करोडको जैतुन खेर जाँदा सरकारको ध्यान कता ?
बाजुर – बाजुरा जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा स्थानीय जातको जंगली जैतुन प्रशस्त भए पनि संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा खेर जान थालेको छ ।
स्थानीय जातको जैतुनले दिने फलको संकलन र प्रशोधन नहुँदा चराचुरुङ्गीले खानुबाहेक अरु उपयोग हुन नसकेको बूढीगंगा नगरपालिका–३ का जयराज उपाध्यायले बताउनुभयो । जिल्लालाई जैतुन जोनका रुपमा विस्तार गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
जिल्लामा हाल ६ सय ६९ हेक्टरमा जंगली जैतुन रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जैतुन कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतमले बताउनुभयो ।
“पहिला स्थानीयवासीमा चेतनाको अभाव थियो, जैतुनलाई घाँसका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले विस्तारै जैतुनको महत्व बुझ्न लागेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीयवासीले केही मात्रामा जैतुनको फल संकलन गरे पनि अनुसन्धान फार्म कोल्टीमा रहेको जैतुन प्रशोधन मेशिन बिग्रिएपछि गत वर्षको फलसमेत त्यसै खेर गएको जैतुन अनुसन्धान फार्मका प्रमुख जनेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
जैतुन प्रशोधन मेशिन चलाउनका लागि प्राविधिक नहुँदा मेशिन राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय जातको जैतुन पेल्न स्थानीयवासीले नयाँ मेशिनको माग गरेका छन् ।
आगामी वर्षका लागि कृषकको माग बढ्ने जोन कार्यालयका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतमले बताउनुभयो । एक सय हेक्टरको पाँचवटा ब्लक निर्माण गरेपछि जोन हुने र त्यस्तो जोन दुईवटा विस्तार गरेमा सुपरजोन घोषणा गरिने प्रावधानअनुरुप अहिले बगैँचा र ब्लक विस्तारको तयारीमा आफूहरु रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सुपरजोन निर्माण हुँदा जिल्लामा जैतुनको बृहत् व्यावसायिक उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विस्तार हुने हुँदा स्थानीय तह र स्थानीयवासीले समेत जैतुन खेतीलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बाजुरामा जैतुन तथा अन्य फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्न सकेमात्र गरिबी घटाउन सकिने कतिपयको तर्क छ । जैतुन सयौँ वर्षसम्म पनि जीवित रहेर फल दिइरहन सक्ने र सधैँ हरियो भइरहने फलफूल बालीभित्र पर्छ ।
जैतुनमा खान र दल्न मिल्ने सर्वोत्कृष्ट तेल हुने भएकाले तेलहन बालीका रुपमा पनि लिइन्छ । जैतुनको तेलको नियमित प्रयोगले मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगलाई निको पार्छ भने रोग प्रतिरोधक क्षमतासमेत बढाउने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
तेलबाहेक आयुर्वेदिक औषधि, साबुन, सेन्ट र कस्मेटिक सामग्री बनाउनसमेत जैतुनको प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रतिलिटर रु २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँ जैतुन तेलको मूल्य पर्छ । जैतुनको खेतीले वन र वातावरणमा समेत सुधार ल्याउने हुँदा यसले कृषि पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
Previous articleबसाउने चामलको माग बढेपछि बीउ खोज्दै नार्क
Next articleबंगुरले भिषा रोके पछि……….